Sida Loo Noolaado Tweet dhacdo: Talooyin, Hababka ugu Fiican, iyo Tusaalooyinka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loo Noolaado Tweet dhacdo: Talooyin, Hababka ugu Fiican, iyo Tusaalooyinka
Sida Loo Noolaado Tweet dhacdo: Talooyin, Hababka ugu Fiican, iyo Tusaalooyinka
Dhacdo tweet-ka tooska ah waxay ka dhigtaa taageerayaashaada inay ku hawlan yihiin oo lagu wargeliyo dhacdooyinka ay rabaan inay shakhsi ahaan uga qaybgalaan laakiin, sabab kasta ha ahaatee, ma awoodi karaan.
Ka fakar sida warbixinta dhacdo. Sida "weriyaha," waxaad haysaa awoodda aad ku gudbiso dhammaan macluumaadka taageerayaashaadu ay rabaan inay maqlaan.
Oo marka aad sidaas ku samayso dhacdo iyaga khuseeya, waxaad arki doontaa iyaga oo wax badan kula jira.
Waxay xitaa bilaabi karaan inay kuu arkaan ilaha wararka warshadaha.
Haddi aad martigelinayso dhacdo ama aad mid u socoto, waxaanu doonaynaa inaanu ku caawino.
Hoos waxaan ku soo darnay talooyinkeena ugu wanaagsan ee ku saabsan twitter-ka dhacdo si toos ah, oo ay ku jiraan tusaalooyin iyo dhaqamada ugu wanaagsan.
Maxaad ugu noolaan kartaa tweet-ka?
Tweet-ka tooska ah wuxuu ka caawin karaa ganacsiyada inay kor u qaadaan wacyiga sumadda, kordhiyaan ka qaybgalka, ama inay dareenka u soo jeediyaan dhacdo ama olole wakhtiga dhabta ah.
Waa maxay sababtu? Fudud: Dadku waxay u jeestaan ​​Twitter dhacdooyinka waaweyn.
Laga soo bilaabo akhbaarta jabinta ee ku saabsan masiibooyinka dabiiciga ah ilaa dhamaadka bandhiga telefiishanka, waxaan ku nool nahay tweet-ka waxyaabo si aan ula kulano qof kale.
Laakiin kaliya ma ahayn kuwa xiiseeya House Stark kuwa si toos ah tweet-ga ugaga hadlayay Game of Thrones. Noocyada adduunka oo dhan ayaa la soo booday sheeko-xumo, GIF-yada falcelinta, iyo nuxurka asalka ah.
Tani waxay ka caawisay inay helaan dareenka daawadayaasha cusub, iyagoo siinaya madadaalo, nuxurka soo jiidashada taageerayaashooda hadda.
U samaynta wax la mid ah astaantaada waxay xoojisaa ka qaybgalka waxayna soo jiidataa taageerayaal cusub. Oo marka aad ku nooshahay tweet dhacdo aad soo saarayso, waxaad haysataa fursad aad kor ugu qaaddo oo aad u keento wacyigelin ka badan sidii hore.
Sida loo noolaado dhacdo tweet-ka: 6 talo ee guusha
Haddi ay tahay shirka aad ka qayb galayso ama bandhiga wakhtiga nasashada ee dhacdo isboorti oo wayn, tweeting live-ka waxa ay u baahantahay istaraatiijiyad iyo khibrad badan sida qorshooyinkaaga warbaahinta bulshada ee mudada dheer.
Si aad u caawiso, halkan waxaa ah 6 talo oo si guul leh oo toos ah tweeting dhacdo.
1. Diyaari ka hor dhacdada
Waxyaabo badan ayaa ka dhaca xitaa dhacdooyinka ugu yar - waana shaqadaada inaad la socoto dhammaan.
Nasiib wanaag, Twitter waa madal aad u wanaagsan oo lagu jebiyo wararka laguna diiwaangeliyo dhacdooyinka waqtiga dhabta ah. Laakiin taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad sii wado ama aad halis u noqoto inaad dib u dhacdo.
Isku diyaari ka hor si aad u hubiso inaad diyaar u tahay inaad si degdeg ah wax u qabato oo aad la xidhiidho inta aad ku nooshahay tweet-ka dhacdadaada. Tani waxay kaa caawinaysaa in aad habaysan u sii ahaato marka ay arintu sii socoto, waxayna kaa caawinaysaa in aad murugooto oo aad ku dillaacdo meel ilmo ah iyo walaac (dhammaanteen halkaas ayaan joognay).
Dhowr talo oo kaa caawin doona inaad diyaariso:
Baadhitaankaaga samee. Hubi inaad taqaan magacyada (iyo sida saxda ah loo higgaadinayo) iyo Twitter-ka qof kasta oo ku lug leh dhacdada. Ka fakar su'aalo kasta oo dhagaystayaashaadu ay ka qabaan dhacdada una diyaari jawaabaha, haddii aad hayso.
Samee qaab sawireed Kuwani waxay kuu oggolaanayaan inaad u soo jeediso nuxurka dhacdada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Samee qaab-dhismeedka sawirada (876 x 438 pixels) oo ay ku jiraan hashtag dhacdada, summadaada, ama hantida kale ee muuqaalka oo isticmaal si aad u abuurto nuxur ku salaysan sawirro ama xigasho dhacdada.
Samee durdurro gaar ah. Haddii aad isticmaasho aaladda maareynta warbaahinta bulshada sida Hootsuite, waxaad ku dhejin kartaa laba durdurrada dashboardkaaga. Mid ayaa noqon doona dhammaan macluumaadka isticmaala hashtag-ka rasmiga ah ee dhacdada aad toos ugu soo dirayso tweet-ka (wax badan oo intaas ka dambeeya) iyo kan labaadna waxa uu noqon doonaa liiska Twitter-ka oo aad ka abuurtay dhammaan dadka ku lug leh dhacdada. Haddi ay noqoto musharrixiinta iyo bandhigayaasha bandhiga abaal-marinnada ama kuwa ka hadlaya shirka, samaynta qulqulka liiskan waxay hubin doontaa inaadan hal Tweet ka maqnaan dadka ugu muhiimsan munaasabadda.
Samee dhawr tweets ka hor dhacdada. Haddii aad hore u taqaanay jadwalka dhacdooyinka, samee dhawr tweets oo ku saabsan waxyaalaha aad ogtahay inay dhici doonaan. Hadliye caan ah ma socon doonaa 3pm? U samee tweet-ka taas. Ma ku dhawaaqi doonaan sii deynta alaab subaxdii? U samee tweet-ka taasna!
Soo-dejinta tooska ah ee tweet-ka waxay noqon kartaa mid mashquul badan. Iska ilaali inaad isku diyaariso kahor.
2. Diyaar u noqo inaad ka jawaabto
Sida maahmaahdu tiraahdo, "Qorshayaasha ugu wanaagsan ee la dejiyo ee jiirarka iyo ragga inta badan way qaldamaan."
Waxaa laga yaabaa in wax walba si fiican loo qorsheeyo laakiin waxyaabo lama filaan ah ayaa dhacaya.
Dhacdooyinka tooska ah ayaa had iyo jeer ku jira waqtiyo aysan cidina saadaalin karin. Markay taasi dhacdo, waxaa laga yaabaa inaad ilowdo qaar ka mid ah tweets iyo sawirro hore loo qorsheeyay, oo aad lasocoto wax kale.
Ku tiirso fowdada. Ka faa'iidayso markaad toos tweet garayso oo u sheegayso dhagaystayaashaada waxa socda. Way kugu jeclaan doonaan.
Waxaad xitaa tan ku samayn kartaa dhacdooyin aan daruuri ahayn in aan wax xidhiidh ah la lahayn summadaada.
Hal tusaale oo weyn oo ah dhacdo tweeting toos ah ayaa ka timid No Name Brands. In kasta oo ay macaamiishooda siiyaan cuntooyin guud iyo alaab guri, waxay go'aansadeen inay ku noolaadaan tweet-ka Emmys-ka qof walba aad ugu farxo.
Hoos ka eeg qulqulka tweet-ka ee yaabka leh.
Hadda waxaan si toos ah u gelin doonaa tweet-ka emmys-ka
- magac la'aan (@NoNameBrands) Sebtembar 22, 2019
Dareenkooda iyo faallooyinkooda dhacdooyinka habeenimo waxay ahaayeen kuwo aan qornayn, qosol badan, oo dhammaantood ku qornaa codkooda calamiga ah ee geesinimada leh.
Waxaas oo dhan inkastoo xaqiiqda ah in aysan ogeyn waxa ka dhici doona Emmys.
3. Samee hashtag
Abuuritaanka hashtag calaamadeysan waxay u oggolaaneysaa kuwa raacsan inay si fudud ula socdaan oo ay ula socdaan tweets-kaaga tooska ah.
Tusaale ahaan, Akadeemiyada Farshaxanka Sawirka Motion iyo Sayniska waxay isticmaashaa hashtag #oscars bandhiga Abaalmarinta Akadeemiyada sanadlaha ah.
Eeg khudbadii Mahershala Ali oo dhamaystiran #Oscars. pic.twitter.com/l9mGVvt7Rk
- Akadeemiyada (@TheAcademy) Febraayo 25, 2019
Oo haddii aad si toos ah u soo dirayso tweet-ka dhacdo aanad martigelinayn, waxaad weli taabsan kartaa ka-qaybgalka addoo isticmaalaya hashtag-ga dhacdada.
Waa kan tusaale uu Olimbikada Usain Bolt soo dhigay bartiisa Twitter-ka intii lagu jiray Ciyaaraha Olombikada Xagaaga ee 2016 ee Rio De Janeiro isagoo isticmaalaya hashtag #Rio2016.
4×100 🏅# Rio2016
- Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) Ogosto 20, 2016
Haddii aad marto dariiqa dambe, hubi inaad ogtahay waxa hashtag-ga rasmiga ahi yahay, iyo sidoo kale hashtag kasta oo kale ee soo geli kara.
Haddii aad u samaynayso hashtag dhacdo aad martigelinayso, xasuusnoow inaad ka dhigto mid gaaban. U fududee in la xasuusto oo hubi inaad hubiso haddii qof uu hore u isticmaalayey.
Pro-caarada: U samee qulqulka Hootsuite si aad ula socoto hashtag-ka, oo hubi inaad ku isticmaasho Tweet kasta oo aad dirto. Isha ku hay hashtag kasta oo soo baxaya oo bilaabaya caannimada inta lagu jiro dhacdada taas oo laga yaabo inay khusayso astaantaada si aad u bilowdo isticmaalka.
4. Isku qas
Hubaal, waxaad dhejin kartaa sawirka dhacdadaada halkan ama halkaas. Waxaad xitaa ku dari kartaa faallooyin ku saabsan hadalka qofka hadlaya. Laakiin miyaanay ka xiiso badnaan doonin haddii aad wax ka beddesho?
Noocyo kala duwan oo ka kooban ayaa si fiican u mashquuliya oo madadaliya kuwa raacsan.
Waa kuwan tusaalooyin wanaagsan oo ah noocyada tweets ee aad samayn karto:
Xigasho ka yimi kuwa ku hadla ama soo bandhigayaasha.
Jawaabaha su'aalaha laga yaabo inay dadku qabaan iyagoo isticmaalaya hashtagkaaga dhacdada
Su'aalo ama ra'yi ururin ku saabsan mawduuc la xidhiidha dhacdada
Sawirro laga soo qaaday dhacdada iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeedka sawirkaaga
Fiidyowyada muuqaalka gadaashiisa, ama wararka ka soo baxay dhacdada
Dib u twitter-ka hadlaayasha, soojeediyeyaasha, ama jilaayada
Dib u twitter-ka faallooyinka qosolka leh ama wax-ku-oolka leh ee ku saabsan dhacdada ee isticmaalayaasha kale ee Twitter.
Fiiro gaar ah: Haddii aad qorsheyneyso inaad soo dhejiso sawirro ama fiidiyowyo dhacdada, hubi inaad haysato oggolaanshaha habboon iyo oggolaanshaha habboon ee sidaas.
Haddii aad u baahan tahay caawimo dheeraad ah oo la socota tweets, hubi fikraddayada nuxurka xaashida khiyaamada si aad u hesho dhiirigelin.
5. Samee tweet kasta oo aad tiriso
Had iyo jeer ka fiirso waxa aad tweet garayso, xataa haddii arrimuhu si degdeg ah u socdaan.
Way sahlanaan kartaa in la huro tayada si loo helo nuxurka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. La dagaallama dareenkaas, oo iska hubi inaad tweet garayso kaliya waxyaabaha ay taageerayaashu daneeyaan.
Ka dooro oraahyada ama fikradaha aad doorato inaad tweet gareyso oo kaliya dheji sawiro iyo muuqaalo tayo sare leh.
Qofna ma doonayo inuu arko sawirka blur ee afhayeenka qolka mugdiga ah, ama muuqaal leh tayada codka xun. Xusuusnow: waxaad isku dayaysaa inaad dadka ka caawiso inay dareemaan inay dhab ahaantii kula soo qayb galayaan xaflada.
Cision waxa uu qabtay shaqo fiican oo uu ku doortay muuqaal adag isaga oo si toos ah u soo qoraya tweeting inta lagu guda jiro shir warbaahinta bulshada ee Ragan.
"Muuqaalka iyo sawir qaadista, Ilaahayow, haddii aad si sax ah u saxdo runtii waa wax cajiib ah" @Stevecla #RaganDisney @Microsoft pic.twitter.com/4HGZ1NCSQT
- Cision (@Cision) Maarso 11, 2016
Hubi inaad wax badan ku darto waxa aad tweet garayso Tusaale ahaan, sheeg magaca qofka hadlaya marka lagu daro sawir ama muuqaal iyaga ah. Waxaa laga yaabaa in xitaa ay ku jiraan isku xirka boggooda noole ama degelkooda.
Hubinta in Tweet kasta oo aad soo dhejiso uu faa'iido leh, madadaalo, waxbarasho, ama qiimo leh sidoo kale waxay kaa caawin kartaa inaad hesho taageerayaal cusub. Marka ay dadku baadhayaan hashtag dhacdada, waxay heli doonaan macluumaadkaaga, waxayna dooran karaan inay ku raacaan haddii ay u arkaan mid xiiso leh oo ku filan.
6. Isku duub oo dib u soo celi
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ku saabsan tweet-ka tooska ah ayaa ah nuxurka nuxurka ay ku siin karto marka ay dhacdo dhammayso.
Markaad dhammayso, ka soo ururi dhammaan tweets-kaaga ugu fiican dhacdada oo gal boostada blog oo la wadaag taageerayaashaada. Ama dib ugu dheji sawir-qaadistooda Sheekooyinkaaga Instagram-ka.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa fiidiyow kasta oo ku hadla sida nuxur ahaan si aad ugu xayeysiiso meelaha sida YouTube ama Facebook.
Sawirada dhacdada ama sawirka muujinaya xigasho laga soo xigtay afhayeenka ayaa ku habboon aaladaha sida Facebook ama Instagram, sidoo kale.
Kahor inta aadan toos tweet-ka-toosin, ku hubee qalabka saxda ah. Ku habbee waxa ku jira durdurrada, samee oo daabac Tweets, oo la soco ka qaybgalka dhammaan hal meel - hootsuite dashboard-ka. Isku day bilaash maanta!
Beddel goobahan si aad uga dhigto batterigaaga Apple Watch inuu maalinta oo dhan jiro